ဟာသလေးတွေ.. - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်ဟာသလေးတွေတင်မလို့ လိုက်ရှာတာ ရှာမတွေ့လို့ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာသာတင်လိုက်ပါတယ်. သက်ဆိုင်သူများ အမြင်မတော်က ရွှေ့ပေးကြပါကုန်.. :d:d
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာ ကုန်ဆုံးနိုင်ဖို့ အရယ်အပြုံးတွေ လိုအပ်ပါတယ်.. မရယ်ရင် အသက်ရှင်နိုင်ဖို့တော်တော်ခဲယဉ်းသွားပါပြီ.. ဒါကြောင့် အရယ်အပြုံးတွေနဲ့ ဘ၀အမောကို ဖြေကြစို့လား.. ကျွန်တော် စတင်မယ်ဗျာ.. နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့.. ကိုယ်တိုင်ရေးလေးတွေရော.. ကော်ပီတွေရောပေါ့.. တခြားသူတွေလည်း ၀င်ရေးပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ.. ၀င်ရေးပေးကြပါနော်.. တစ်ယောက်ထဲနဲ့ဆို ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်လို့ပါ.. ဟာသဆိုတာ ဖတ်သူရယ်ရသလောက် ရေးသူဦးနှောက်ခြောက်ရသကိုးဗျ..:2::2:
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီဟာ သူ့ရဲ့ product အသစ်ဖြစ်တဲ့ ၀င်းဒိုးဆဲလ်ဗင်းကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ရာမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါကြောင့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ ယခင် ceo ဘီးလ်ဂိတ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခုကို သူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်.. သတင်းထူးရနိုင်မယ်ထင်လို့ မြန်မာနိုင်ငံက သတင်းထောက်တစ်ယောက်က သွားရောက် သတင်းရယူခဲ့ပါတယ်вЂ¦. အဲဒီ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံက သတင်းထောက်မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကြောင့် ဘီးလ်ဂိတ်ခမျာ ဘီးတောင် ကောင်းကောင်းမဖြီးနိုင်ရှာဘဲ သောကတွေ ပင်လယ်ေ၀သွားပါတယ်.. သူတို့ ပြောကြပုံကတော့вЂ¦
ဘီးလ်ဂိတ်..။ ။ အခုဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းသစ်ဟာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေပါပြီ.. ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်က စပြီး ၀င်းဒိုးဆဲလ်ဗင်းကို ဒေါ်လာ 1,000 လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီвЂ¦
သတင်းထောက်..။ ။ တစ်ခုလောက်မေးပါရစေခင်ဗျ.. အခုစျေးတိုးမြှင့်မှာ မူရင်းခွေတွေမလားвЂ¦။
ဘီးလ်ဂိတ်..။ ။ အင်းလေ. ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်း အစစ်အမှန်တွေပါ.. မူရင်းပါ.. အတုအပလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး..
သတင်းထောက်..။ ။ ဟူးвЂ¦вЂ¦вЂ¦ တော်ပါသေးရဲ့ ခိုးကူးခွေ မပါလို့.. ဒီမှာ မစ္စတာ ဘီးလ်ဂိတ် ခင်ဗျားဘာသာ ဘယ်လောက်စျေးတက်တက် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ခင်ဗျား၀င်းဒိုးက ဒီဗီဒီအဖြစ်နဲ့ ဘန်းရလို့ တစ်ခွေ အလွန်ဆုံး မြန်မာငွေ 1,500 ကျပ်ပဲ.. ဒါမှမဟုတ်ရင် အဲဒီ့ အခွေရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီက ခဏငှားပြီး ကူးရင် ဒီဗီဒီ အချပ်လွတ် တစ်ချပ်ဖိုး 200 ကျပ်ပဲ ကုန်တယ်ခင်ဗျ..